21 December, 2018 in Wararka by Baidoanews Webmaster
Anas Khalil ayaa hay'adaha ammaanku u arkeen inuu xiriir la leeyahay kooxda Daacish ee Soomaaliya xiriirna la leeyahay mid ka mid ah hawlwadeennada kooxda. Tani waa caddeymaha kasoo baxay Digos oo ah saldhigga Boliiska ee gobolka Bari.
Caddeymaha hay’adaha ammaanku heleen waxaa lagu sheegay in ay jiraan weerar aad u xun in lagu soo beegi rabo maalmaha ciidda Kirismaska iyadoo la weerarayo kaniisado iyo meelo ay u badan yihiin dadka Kirishtaanka ah.
Baareyaasha gacanta ku haysa muwaaddinkaan Soomaaliga ah ayaa sheegay iney baaritaan ku sameeyeen taleefankiisa iyagoo helay qalab badan oo laga shakisan yahay oo uu haystay 20 jirkaan waxayna intaas ku dareen in la helay sawirro carunta Vaticanka oo uu labaatan jirkaan kasoo dejiyey Internetka.
Waxaan rajeynaa in kii dila Kirishtaanka, Cadowha Ilaahey inuu yahay walaalkeen, meeshii uu ka yimaadaba haddiiba uu dilayo Kirishtaan waa walaalkeen” 20 jirkaan ayaa hadalladaas yiri markii weerar ka dhacay Strasbourg Decembertii tagtay 11keeda. Sida ay sheegaan baareyaasha ka hortaga argagixisada ee gobolka Bari.
Subaxnimadii sabtida iyadoo uu la socdo qof difaacaya iyo turjubaan ayaa ninkan la tuhunsan yahay su’aalo lagu weydiiyey xabsiga ka horbaaritaanka xaakinka. Wuxuu ka jawaabayey su’aalaha illaa laba saacadood iyadoo xaakinka gobolka Bari ee isku-duwaha ka ah baaritaannada Giuseppe Maralfa, uu sii xoojiyey aadeymaha la xiriira argagixisada.